ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းကို ခိုးကြည့်မိလို့ ထောင်ကျသွားတဲ့ ဇနီးသည်
Thet Naing Swe (21/07/50748)
အပြာ ဗွီဒီယိုလောကထဲက မြန်မာ အပြာ မင်းသမီး လေးအကြောင်း
Android Gmail app တွင် ငွေပို့ငွေလွှဲ ပြုလုပ်နိုင် ..!
အပြေးသမား ရှောင်ရမည့် အကျင့်ဆိုးများ
သင့် ဖုန်း ကို သူများမဖွင့်နိုင်မယ့် lock screen များ ...!
သင့်ဗိုက်ခေါက် ထူနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း (၆) ခု
ယူအေအီးနိုင်ငံရဲ့ရာဆာ ခိုင်းမာ (Ras Al Khaimah) မြို့ တရားရုံးတစ်ခုဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ဖုန်းကို ခိုးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ ပြစ်ချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်သုံးလ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေး အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး
သူ(မ)ဟာ အဲဒီအတွက်ကြောင့် တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ပွန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရ သူမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးက သူ့ဖုန်းကိုယူကြည့်တဲ့အပြင် နောက်မှ သတ်သတ်ထပ်ကြည့်ဖို့အတွက်လည်း သူ့ဖုန်းထဲကဒေတာတွေကို နောက်ဖုန်းတစ်လုံးထဲ ကူးပြောင်းခဲ့သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း သူ့အမျိုးသမီးက ဖုန်းထဲကို မွှေနှောက်ပြီး ကြည့်ရှုခဲ့သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အမျိုးသမီးဘက်ကပြန်လည်ချေပချက်အရ အရင်တုန်းက သူ့ခင်ပွန်းနဲ့ တခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ မတ်ဆေ့ခ်ျပို့စကားပြောနေတာကို တွေ့ရှိပြီးကတည်းက ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ သူ့ကို ဖုန်းရဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ်လည်းပေးထားတဲ့အပြင် ကြည့်ခွင့်လည်းပေးထားပြီးသားလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယူအေအီးရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ ဆိုင်ဘာဥပဒေတွေအရ ပိုင်ရှင်ရဲ့အခွင့်မရှိပဲ ဖုန်းကို ယူကြည့်တာဟာ ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးသားစုံတွဲတွေတောင်မှပဲ မိမိရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းဖောက်ပြန်နေတယ်လို့သံသယရှိရင်တောင် ဖုန်းကို ယူကြည့်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ယူအေအီးရဲ့ဥပဒေအရ ဘယ်လိုအွန်လိုင်းအချက်အလက်မဆို ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အိမ်ထောင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုး၊ မိဘ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် စသူတို့က ယူကြည့်ခဲ့ရင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းလို့ ယူဆခံရကာ ပြစ်မှုမြောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာတော့ ယူအေအီးသမ္မတ ရှိတ် ခါလီဖာ (Sheikh Khalifa) က ထောင်ဒဏ် (၂၅) နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ ဆိုင်ဘာဥပဒေအသစ်တွေ ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
Copyright © 2017, Thadinsone Team